Mahwendefa akanakisisa evana, ndeupi wekusarudza kune vadiki?
The best tablet yevana
Tichifunga kuti vana ndivo ramangwana redu uye avo vachadya ruzivo mune ramangwana. Tinoda piritsi rakanyanya kubudirira revana Zvine musoro kuti tekinoroji yemazuva ano inayo, kunyangwe isiri yakawanda.
Mumusika wepiritsi tinogona kuwana zvimwe zveizvi zvishandiso zvakagadzirirwa vana vadiki nemaoko ake madiki. Zvimwe mabhureki haafanire kuita zvakawanda kuvana chete sezvo masevhisi mazhinji anogona kushandiswa nevana atova mune mamwe mahwendefa. Mienzaniso yakaita seAmazon Kindle Yemahara Nguva kana iyo Netflix interface. Ndeipi iri hwakanakisisa piritsi yevana? Pano tichakupa runyoro ruduku rwezvakanyanya kukoshesa uye kutengeswa kuitira kuti zvive zvakaoma kuti usarudze.
1 Mahwendefa akanakisa evana
1.1 Goodtel Tablet
1.2 Wonder island
1.4 Kindle Moto 7
2 Best mapiritsi evana maererano nezera
2.1 Under 18 months
2.2 2-4 makore
2.3 4-6 makore
2.4 6-10 makore
2.5 10-12 makore
3 Chii chaunofanira kufunga usati watenga tablet yevana
3.1 Zera remwana
3.2 Shandisa kupiwa
3.3 Kuwanika kuGoogle Play
3.4 Tablet chaiyo yevana kana yakajairika?
4 Chii chekutarisa muhwendefa revana
4.1 The operating system
4.3 Mamwe ruzivo rwehunyanzvi
4.4 Zvinyorwa zvekutanga
4.5 Zvinodzora nemasefa
4.6 Zviri nyore kushandisa
4.8 Ita zvakachipa
5 Maitiro ekushandura piritsi rakajairwa kuita piritsi revana
6 Nguva yekutenga tablet yemwana
7 Ndekupi kutenga tablet yevana yakachipa
8 Mhedziso pamusoro petafura yevana
Mahwendefa akanakisa evana
Mune yedu runyorwa iwe unowana iwo masere akaunganidzwa uye akaongororwa mahwendefa akanakisisa evana, saka unogona kusarudza mudziyo wakakodzera zvakanyanya kune zvinodiwa nemwana wako.
Tablet yeVana gumi ...
Hwendefa qunyiCO Android ...
Hwendefa 10 Inch ...
Tablet PC yevana, ...
Aya mahwendefa ndiwo anonyanya kukoshesa pamusika akagadzirirwa zvakananga kune zviduku. Chimiro chayo uye mavara ezvivharo zvayo uye nyore nyore kushandiswa zvakagadzirirwa kukwezva kutarisa kwevana uye panguva imwechete inodzivirirwa kubva kune zvinyorwa uye tsoka. Kupfuura tekinoroji, chakakoshawo kudzivirira.
Kana mwana wako asiri mudiki kudaro, zvingangoita kuti pazera rino havasisina hanya zvakanyanya nezveruvara uye magadzirirwo asi nezvemitambo uye zvavanogona kuita nemudziyo. Nechikonzero ichi takanyora mahwendefa akayerwa akanakisa e isingasviki manhamba matatu. Ichokwadi kuti vanokura nokukurumidza, asi vanenge vasina hanya nezvinhu uye havazofungi nezveukoshi hweupfumi hwechinhu vasati vasiya chero kupi zvako.
Tinokurudzira, kukuporesa muhutano, iyo piritsi yevana vanopfuura makore 8 inodhura zvisingasviki makumi maviri emadhora.
Mumusika kune zvakawanda zvakasiyana-siyana zvezvipo zvinogona kuva zvakakodzera vana vako uye zvakanakisisa kuenzanisa zvimwe zvigadzirwa usati wasarudza kuziva kuti ndeipi yakanakisisa yechisikwa chako chinokosha. Iyi ndiyo pfungwa iri shure kwechinyorwa chanhasi: sarudza yakanakisa piritsi yevana sezvo, kana tikasarudza zvakanaka, mudziyo uyu anogona vandudza ruzivo uye unyanzvi zvevana zvinobudirira.
Tenga tablet ichashandiswa nevana vako hazvina kufanana nekutenga mudziyo wega zvakafanana. Kunyange vanhu vakuru vachikoshesa zvinhu zvakaita sekumhanyisa, kuchengetedza, kana sisitimu yekushandisa, vana vazhinji havanei nazvo kana piritsi racho richishandisa Android kana iOS kana kuti purosesa iri Snapdragon kana purosesa yemazuva ano. Manzana.
Pane kudaro, vana vanoda chinhu chinonakidza uye chiri nyore kushandisa saka vanogona kutamba mitambo yavanoda vasinganetseki nezvechimwe chinhu. Vabereki, ivowo, vanoda kuti tablet ichatambirwa nevana vavo iuye yakafanorongedzerwa zvakakwana zvemukati uye maitiro kwavari, kusanganisira chirongwa chevabereki chinodzora chinopa kubhurawuza kwakachengeteka kuvana vavo uye kunobatsira kuvadzivirira kubva kune zvinokuvadza kana zvisina kufanira. Kusimba, kana kuti kuramba, kwemudziyo wacho chinhu chinonetsawo, kunyanya panguva idzo vana pavanotanga kubata mudziyo wacho sokunge bhora renhabvu kana sando.
Vabereki vane vana vanopfuura mumwe havafanirwe kutenga mudziyo kune mumwe nemumwe wavo. The Goodtel Inodzidzisa zvikuru mupfungwa iyi, sezvo ichibatsira zvikuru kudzidzisa vana vako kukosha kwekugovera kutenda kune mukana wekugadzira anosvika masere akasiyana profiles.
GOODTEL Tablet ye...
Chinhu chakakosha pahwendefa revana inguva yekuverengera inoita kuti vana vazive kuti inguva yakadii yasara yekushandisa piritsi, saka haufanirwe kunetseka nezvekuti vana vako vari kuramba vachitamba mitambo. Shiri dzine hasha yapfuura nguva yako yekurara.
Chinhu chikuru pahwendefa revana reWonder Island ndechekuti rinokwanisa kubatanidza pasina waya neSmartphone yako kuitira kuti vana vako vakutumire mameseji pavanenge vachiida chero bedzi Wi-Fi yeWi-Fi yabatidzwa.
Tablet Vana 7 Inch ...
Pamusoro pezvo, ine chirongwa chinonzi Wish List Maker chinotadzisa vana kutenga zvikumbiro zvisiri pamutemo, vachivabvumidza kuti vanyore magwaro avanoda kuti vabereki vavo vavatengere. Vanogona kuongorora runyoro kubva kune yavo yakangwara mbozha mbozha kana komputa vofunga kuti votenga here kana kuti kwete.
Kune yega yega Apple fan fan, avo vanoda kuve nazvo zvese kubva kumhando, iyo iPad Mini 4 ndiyo yakanakisa sarudzo yevana vako. Mutengo wacho uri kure kwazvo kubva kune mamwe maturusi akagadzirirwa vana asi haufanirwe kukanganwa kuti uri kubhadhara mutengo wepamusoro nekuti mudziyo wepamusoro-soro.
2019 Apple iPad mini (kubva ...
Nekune rimwe divi, Apple inopa zvakanyanya-yakatarisana nemhuri maficha akadai seKugovana Kwemhuri izvo zvinokutendera iwe kuti ugadzire maakaundi akasiyana enhengo yega yega yemhuri kana iyo Imwe App modhi iyo inokutendera iwe kudzikamisa kuwana kwemwana wako kune zvinopfuura imwe application panguva imwe chete. nguva.. In kuenzanisa uku iwe uchaona mamwe iPad mhando.
Ehe, isu tinoziva kuti iyo iPad Mini inodhura zvakanyanya kumwana asi chinhu chakanaka nezveApple piritsi ndechekuti Ine matani emakavha evana anoita kuti isaparara zvachose. Kumwana unoshandisa nekavha uye ukaitora unoibvisa uye une tablet ine maadvants ese eIOS nemhando yeApple.
Kindle Moto 7
Kana tikafunga nezve mutengo wayo uye maitiro, iyo Kindle Fire HD 6 ndiyo yakanakisa sarudzo kumwana wakozvisinei nezera ravo. Nepo zvimwe zvigadziriso zvakagadzirirwa vana zvakanangana nezera diki, yavo inoremekedzeka HD 6 resolution ye1280 x 800 pixels uye nekukurumidza Fire operating system ichafadza vana vakura nevabereki zvakafanana.
Hwendefa Moto 7, skrini ...
Mukuwedzera, kune anenge matatu euros pamwedzi iwe unogona kushandisa Nguva yakasununguka iyo inopa iyo inoshanda sisitimu nzira "yevana" nekubvumira vabereki kuti vatange shandisa miganhu yenguva uye sarudza zvikumbiro, mitambo uye zvirimo izvo mwana achakwanisa kutaurirana nazvo, kuganhurira kuwana mamwe marudzi ezvinyorwa.
Vabereki vakawanda vanotengera vana vavo tablet. Nekufamba kwenguva, mapiritsi evana akabuda. Mamodheru chaiwo, akagadzirwa kuitira kuti atambe, awane mukana wezvinhu zvinoenderana nezera kana kukwanisa kudzidza nawo. Kune akatiwandei mabhureki muchikamu ichi, kunyangwe iyo SANNUO piritsi ichipa yakanakisa kukosha kwemari.
Iyo ine 10,1-inch screen saizi. Naizvozvo, zvinokutendera kuti utarise zvirimo nekunyaradzwa kwakazara, kunze kwekushanda zvakanaka mune yako, kana ichishandiswa kune zvimwe zvinangwa. Iyo ine 3 GB RAM uye 32 GB yekuchengetedza mukati. Iine sarudzo yakakura yemitambo yevana-inoshamwaridzika uye mapurogiramu, izvo zvinoita kuti zvive nyore kuti vabereki vawane kutsvaga kana kudzikamisa kuwana kune izvo zvisina kukodzera. Mukuwedzera, inouya ne5.000 mAh bhatiri, iyo inopa kuzvitonga kwakanaka, iyo inokubvumira kuti uishandise kwemaawa akawanda pazuva pasina dambudziko.
Iri piritsi rakanangidzirwa kuna jmitambo kuwedzera kune zvedzidzo zvemukati. Naizvozvo, isarudzo yakanaka yekuti vana vadzidze nekutamba nenzira inonakidza. Mukuwedzera, ine chiedza uye chakaonda dhizaini, iyo inokubvumira kuti ugare uchitakura mubhegi rako. Saka inogona kuve sarudzo yakanaka kana uchiitora pazororo.
Best mapiritsi evana maererano nezera
Kana kusarudza tablet yevakuru inogona kuva chimera pane dzimwe nguva, kana zvasvika kune tablet yevana inotonyanya kudaro, sezvo zvakakosha kuziva kuti ndeipi. mudziyo wakarurama uye shandisa zvinoenderana nezera reboka:
Maererano ne AEPAP (Mubatanidzwa weSpanish wePrimary Care Pediatrics) haikurudzire kusiya mapiritsi kuvana vari pasi pemakore maviri. Pamazera iwayo, kukurudzira nematoyi kuri nani. Mukuwedzera, pazera iroro, nguva shoma yavanoshandisa pamberi pechidzitiro, zviri nani, sezvo zvingatokanganisa kukura kwavo. Hazvisi kupokana kuti vanogona kuvepo muvhidhiyo kufona nehama, kana kushandiswa kwekupedzisira, asi havafanirwe kunge vaine yavo piritsi.
Pamazera aya vanenge vachiri vadiki kuti vave nepiritsi rinoshanda rakazara. Kune iri boka rezera kune mapiritsi anonyanya kufanana nemagetsi emagetsi pane tablet yevakuru.
Aya mahwendefa ane maitiro ekutonga kuitira kuti asawane zvinyorwa zvisina kufanira, kunze kwekusanganisira mitambo yekudzidzisa chete kana mapurogiramu. Semuenzaniso, kudzidza mavara, matanho ekutanga ekuverenga, mhuka, mavara, nezvimwe. Chero zvazvingava, mwana haafaniri kusiiwa pamberi pechidzitiro kweawa inopfuura 1 pazuva.
Mahwendefa, ari matoyi, haakurudzirwi kuvana veiri rimwe boka rezera, sezvo vakapiwa ganhuriro dzavo vanozoguma vaneta nazvo uye havazogutsi zvavanoda. Vachada kuva nemapiritsi akafanana neevakuru.
Nokudaro, sarudzo yakanakisisa munyaya iyi ndeyokusarudza mahwendefa akachipa ane 7 "kana 8" skrini, iyo inowedzera compact uye yakareruka kuitira kuti igone kubatwa zvakanaka pazera rino. Mukuwedzera, kana vakadzivirirwa kubva pakurova zviri nani, sezvo pamazera iwayo vanogona kukuvadza nemitambo.
Muchiitiko ichi, zviri nani kutenga piritsi rakajairwa, pamwe nepakati-kati masikirini. Mipimo muzviitiko izvi inofanira kuiswa nevabereki, kuburikidza nekutarisa nguva dzose uye kutonga kwevabereki.
Iwe haumbofaniri kusiya vana vaduku vane mahwendefa vari voga muimba yavo, nguva dzose munzvimbo dzakafanana kuti vazive zvavari kuita nguva dzose.
Nguva munyaya iyi inofanirawo kuva inenge awa imwe chete pazuva, uye kwete panguva yekudya.
Lenovo Tab M10 HD (yechipiri ...
Kazhinji, pazera rino, zvingangove zvinopfuura chishandiso chekuzorora, asiwo chekudzidza. Muzvikoro zvakawanda vari kuunza kushandiswa kwemapiritsi ekushandisa mamwe maapplication edzidzo kana epakati-chaiwo, basa rekubatana, kudzidzisa kure, kuita mabasa kumba, nezvimwe. Naizvozvo, chinhu chakanakisa pazera rino piritsi ine kuita kwakanaka uye yekubatanidza, pamwe neyakakura skrini.
Kune rimwe divi, zvakakosha kuti utarise zvakanaka iyo inokurudzirwa modhi munzvimbo yekufunda, sezvo zvimwe zvikoro zvinokurudzira kushandiswa kweApple iPad uye mamwe emapiritsi eAroid ...
Kana iri nguva yekushandiswa, pano inogona kusara inenge 1 awa nehafu zuva nezuva. Uye kubva pamakore 12-16 iwe unogona kukwira kusvika maawa maviri pazuva uye kubva ipapo hazvizokurudzirwa kukwira pasinei nezera.
Chii chaunofanira kufunga usati watenga tablet yevana
Sarudza a piritsi yevana Zvinogona kunge zvakafanana nekusarudza imwe yevakuru, kune rumwe rutivi, kupfuura tekinoroji maficha, aya maturusi akanyanya uye iwe unofanirwa kutarisisa kune mamwe chaiwo maidi.
Vana imichina yekutevedzera chaiyo. Pavanoona vanhu vakuru vachishandisa mapiritsi, ivo vachadawo. Dambudziko nderokuti kusiya piritsi rinodhura mumaoko emwana kunogona kuva nengozi, kuwedzera kune dambudziko remukati risina kufanira kana njodzi dzekushandisa mahwendefa ane maapp ekubhengi, kana Google Play ine kadhi rechikwereti rakagadziridzwa naro ravanogona kuputika account yako mukubwaira kweziso mukutarisa.
Saka ipfungwa huru sarudza piritsi chaiyo kwavari, inoshingirira, yakachipa, uye ine zvinyorwa zvakakodzera zvemazera akasiyana. Asi nekukwira kwechido ichi, kune mhando dzakawanda uye mienzaniso ine shanduro dzevana (kuwedzera kune mukana wekutenga imwe yevakuru uye kuigadzirisa), izvo zvinoita kuti zvive zvakaoma kuita sarudzo yakanaka.
Kana iwe uchida kuzvigadzirisa, unofanirwa kuterera kune zvinotevera pfungwa dzakakosha:
Haasi ese mamodheru akakodzera mazera ese. Mamwe akanyanya kujeka kune vadiki kwazvo (<4 makore), akadzivirirwa pakurova, ane chitarisiko chakanyanya sechemwana uye chine mashoma. Mamwe anonangana nezera revakuru (> 5 makore), aine mamwe mabasa pamunwe wavo.
Kune rimwe divi, kubva pazera re9 kana gumi, vana vanogona kuita maoparesheni epamberi, uye piritsi yevana ingave kukanganisa. Kubva pazera rino zviri nani kufunga nezvepiritsi yakajairika ine kutonga kwevabereki.
Zvakanakira kushandiswa kwakananga kwavari, uye kwete kugovaniswa, uye nekutarisirwa kwevakuru.
Zvakare zvichaenderanawo nezera. Kune vana vari pasi pemakore matanhatu, 6 kana 7 ”inogona kushandiswa, iine huremu huremu kuvadzivirira kubva kuneta kuibata, uye neyakaganhurwa sisitimu, yakanangana nekudzidza.
Pamusoro pemazera iwayo, vanogona kuashandisa kuverenga, kudzidza, kutamba mitambo, kuona mabhaisikopo uye nhevedzano nekushambadzira, kana kushandisa mamwe maapplication. Naizvozvo, piritsi rakakura kupfuura masendimita manomwe riri nani.
Kuwanika kuGoogle Play
Kana ukasarudza yakajairwa Android piritsi, saka iwe unofanirwa kungwarira zvakanyanya nekuwana muchitoro cheapp, kuti haugone kurodha mamwe maapplication kana mitambo ine zvisina kufanira zvemukati kana kudzivirira mabasa akabhadharwa anosanganisira mamwe acho. PaGoogle Play, kupinda kunogona kudziviswa nekushandisa Android's own parent control system. Kuimisa kuri nyore sekutevera matanho aya:
Vhura Google Play.
Enda kukona yepamusoro yekurudyi, kune iyo Settings menyu.
Wobva waenda kuMhuri.
Zvino tinya pakanzi Parental Control.
Activate basa uye isa pini kuitira kuti varege kudzima pasina iyo.
Wobva waisa mitemo kana zvirambidzo zvaunoda kuisa.
Chimwe chinhu chaunofanira kuita ndechekuti, kana waisa nhamba yako yekadhi rechikwereti muGoogle Play, enda kune Zvirongwa> Zvirongwa> Zvidzoreso zvemushandisi> Kumbira kutendeseka kuti utenge uye udzivirire nepassword kuitira kuti usakwanise kutenga pasina mvumo yako.
Tablet chaiyo yevana kana yakajairika?
Uyu mubvunzo unowanzoitika, kunyanya kana vapfuura makore masere. Kwemazera madiki bhodhi revana riri nani, asi kune vakuru vakuru pamwe unofanirwa kufunga nezvekutenga Samsung Galaxy Tab A, Amazon Fire 8 kana zvakafanana. Iwo ane mutengo wakanaka, uye anokupa rusununguko rwakawanda, uye kunyange kukwanisa kuashandisa kumabasa echikoro. Zvechokwadi, nguva dzose nekutonga kwevabereki.
Mahwendefa evana anowanzo ari pasi pe € 100, kunyange kune mamwe maitiro anogona kukunda chipingamupinyi ichocho. Mamwe mahwendefa evakwegura, akadai seTab A, anogonawo kunge ari pedyo neaya maitiro akafanana.
Nokuda kwechikonzero ichi, kana mwana asvika kune rimwe zera, hazvizove zvakakosha kuisa mari mufurafura yevana iyo inomuberekera pakutanga kuchinja uye haazodi.
Chii chekutarisa muhwendefa revana
Kana zvasvika kune zvishandiso, ndeipi yaunosarudza? Chisarudzo chechisikigo ihwendefa. Iwo masikirini akakura kupfuura mafoni, uyezve hapana kiibhodhi saka mudiki wako haafanire kudzidza mabhatani ipapo. Vana intuitively kubata skrini.
Kune matani emapiritsi evadiki, kubva kumagetsi evadiki kusvika kune akajairwa mahwendefa evakuru anogona kuve nyore zvakakwana kune chero zera. Chero zvazvingava, mitengo yeizvi inonzwisisika, saka hauzonyanya kushata kana rimwe zuva ukapedzisira wanyura mubhavhu wotsikwa nemasitepisi. Pamwe zvishoma. Asi…
Iyo piritsi yakanakira mwanakomana kana mwanasikana wedu ichava iyo iwe yaunogona kunzwa wakasununguka kana wakasununguka kupa kune mudiki uyo achiri asingakoshese kukosha kwemidziyo yemagetsi. Pane zvinhu zvakati wandei zvekuti semubereki kana munhu mukuru unofanira kutarisa kuti vanazvo.
La dandara Iyo piritsi yakakoshawo pakusarudza mudziyo nekuda kwezvikonzero zvinoenderana:
Vana: vanowanzo kuunza masisitimu anoshanda aine kana kushaikwa kwawo, achingove nemamwe mabasa akakosha. Muzviitiko izvi hazvina basa zvakanyanya, zvichipihwa zera rakaderera remushandisi uye zvavanoda.
Android vs. iPadOS: iyi inyaya yekuravira uye bhajeti, kudivi reAroid iwe uchave nemidziyo yakawanda yekusarudza kubva, uye yakawanda siyana mumitengo, nepo Apple ichave inodhura uye ine shoma siyana yesarudzo. Asi chinonyanya kukosha kupfuura izvo kuenderana kwemaapps kana chikuva chakasarudzwa kuchikoro. Sezvandambotaura, vamwe vanokurudzira kushandiswa kwePadad, nepo vamwe vachikurudzira Android, uye vamwe vanotoisiya kune yemahara sarudzo. Muchiitiko chekupedzisira, zviri nani kuti tablet yacho ive kubva papuratifomu imwe chete sehwendefa yevabereki, kana vane imwe, sezvo nenzira iyi vachakwanisa kuva nemafungiro ari nani ekudzora kana chimwe chinhu chikaitika.
Mamwe masisitimu: Kune zvimwe zvakasiyana senge FireOS kubva kuAmazon mahwendefa, kana HarmonyOS kubva kuHuawei, pakati pevamwe, uye kunyange ChromeOS. Ese anowirirana neAroid apps, saka kana iyo app yaunoda iripo yeGoogle system, hauzonetse nekuiisa pavari.
Kune mhando yemavhidhiyo uye zvirimo zvinowanwa nevana, hazvina kukosha zvakanyanya kuve nepamusoro pepaneru, ine yakanyanyisa resolution (1280 × 800 px inogona kunge yakanaka yekutanga nzvimbo), chinonyanya kukosha ndechekuti compact zvakakwana. zera razvichatemerwa. Somuenzaniso, kuvana vadiki a 7 kana 8 ”screen kuitira kuti ive yakareruka uye yakanyatsobatana kuitira kuti vagone kuibata zvakanaka vasinganete.
Kana ari mwana wezera rakakura, zviri nani kubheja pa 10 ”masikirini, kunyanya kana kuri kuverenga kana kudzidza, sezvo izvi zvichaita kuti vasanyanya kuomesa maziso avo. Uye zvakare, iwe unofanirwa kuziva kuti iyo yakakura saizi yepaneru ichave neyakakura kushandiswa kwebhatiri, ndiko kuti, kuzvimiririra kushoma.
Mamwe ruzivo rwehunyanzvi
Kunze kwechidzitiro uye kutonga, kune zvakare zvimwe zvinhu zvingave zvakakosha kana zvasvika sarudza tablet yevana:
Autonomy: hazvina kukosha mudiki zera. Kana vari vana vezera rechikoro chepuraimari kana chesekondari, vangangoda bhatiri hombe rekuita maekisesaizi uye kudzidza.
Processor: Haisi yakanyanya kunetsa poindi, nekukwanisa kufambisa iwo ekutanga maapplication nemitambo yauchange uine, kunyangwe kana ukaronga kuwedzera hupenyu hwehwendefa kwemakore akati wandei, zviri nani kusarudza Mediatek, Qualcomm, HiSilicon uye. Apple mienzaniso, iyo ndiyo ine simba zvikuru.
RAM mari: ndangariro huru inofanira kuva nehushoma hunonzwisisika. Iwe haufanirwe kusarudza mahwendefa asingasviki 2 GB mune chero mamiriro ezvinhu, yakanakira kuve ne4 GB kana kupfuura.
Yemukati yekuchengetedza- 32GB yeflash memory inogona kukwana kune mazhinji kesi. Zvikuru zvirinani kana iine microSD kadhi slot yekuwedzera iyo painodiwa.
Kubatana: ivo vanowanzove WiFi, asi kune zvakare avo vane SIM kadhi slot kuti vape iyo ine data data, sekunge iri mbozhanhare. Saka vanogona kubatanidzwa kubva chero kwavanoda, uye kwete kumba chete. Asi iyo inogona kuva pfungwa isina kunaka mune zvimwe zviitiko, sezvo zvichibvira kuti mudiki anotora piritsi kubva kumba neshamwari kuenda kunzvimbo uko vabereki vasipo, uye kuwana zvisina kufanira zvinyorwa.
Chivharo / mudziviriri: Izvo zvakakosha kuti kana iwe usina dziviriro, senge mamwe mapiritsi evana anotouya nekesi yakavharwa kana akadzivirirwa kubva pakuvhundutswa nekudonha, kuti utenge kesi uye girazi rinodzivirira regirazi rekudzivirira. Saka, kana ikadonha kana kurohwa, chimwe chinhu chakajairika pamazera iwayo, piritsi racho richava ne "mukana wechipiri".
Iwe unozofarira kuti piritsi raunotenga rinotouya nemitambo uye maapplication ekudzidza nekudhirowa nemunwe wako. Zvisinei chimiro ichi haisiriyo yekutanga sezvo uchigona kudhawunirodha zvikumbiro zviri nyore uye zvemahara.
Iyo yakanakisa piritsi yevana ichave ine zvinodzora uye mafirita kuitira kuti vanhu vakuru vanogona kudzora zvavanogona nezvavasingagoni kuita diki. Pane kunyange zvingasarudzwa zvekuona kufambira mberi kwemwana mumabasa avo uye mabasa pahwendefa. Zvimwe zveizvi zvine chinhu chekumisikidza uye kudzima zvidzoreso izvi kuitira kuti gare gare iwe ugozvishandisa iwe pachako nezvose zvinoshanda.
Zviri nyore kushandisa
Kana iyo yakagadzirirwa ivo, yatova neimwe imwe pfungwa kuti ive piritsi yatiri kutsvaga. Zvirongwa zvinofanirwa kukwana zvigunwe zvako uye kuita kuti zvive nyore kufamba zvisinei nezera. Zvingangodaro, iwe unofarira piritsi iyo anogona kushandisa pasina kushamisika nguva dzose sezvairi kushandiswa. Zvichavabatsira dzidza wega uye kukudziridza kugona kunzwisisika. Iyo yakanaka mubazi iri haifanirwe kunge izere nezvikumbiro kana kuti dzakaomesesa zvekuti hazvidi kuve nechipo chekuishandisa.
Kana mwanasikana wako kana mwanakomana ari muduku, iwe uchave uchifarira dhizaini yavanogona kushandisa nayo pasina matambudziko pasinei nemaoko avo maduku. Zvirokwazvo rougher texture ibhonasi sezvo vachida kurasa zvinhu zvose uye zvigadzirwa zvemagetsi hazvisi izvo. Iyo piritsi inogona kuve nekamera isina chirevo ichi kukwidza mutengo wemudziyo zvakanyanya.
Vana vanoda kutora mafoto uye Wifi inogona zvakare kuve inonakidza yekuwedzera kana iwe watova zera uye uchiziva maitiro ekutsvaga anosetsa mavhidhiyo kana kudzidza. Chii chimwe iwe hauzodi yakakwirira resolution kana processor nokuda kwekushandisa iyo vana vanozopa. Izvo hazvina basa kana iwe uchida Android kubva kuGoogle kana iOS kubva kuApple, piritsi rakanakisa revana, remwanakomana kana mwanasikana wako rinogona kunge riri rimwe rezvinotevera, sezvo takavasarudza nekuongorora inotengeswa zvakanyanya uye zvakanaka- yakakosheswa pamusika. Pamwe unozopedzisira wazvichengeta...
Zvakakosha kuti iwe shandisa mari shoma sezvinobvira pahwendefa revana. Sezvatataura, ivo havazive kuti zvinhu zvinodhura sei uye zvichavapa zvakafanana kana tikavasiira piritsi rezana remaeuro kana rimwe rezviuru. Nekudaro, kana piritsi racho rikadonha rikatyoka, zvinotirwadza zvakanyanya kana isu tiri muchiitiko chechipiri.
Vana kana vari vadiki vanokoshesa ukuru hwezvinhu zvakanyanya. Ndinoreva, vanofunga izvozvo imwe piritsi iri nani pane imwe nekuda kwechokwadi chiri nyore kuti ine yakakura skrini kupfuura imwe, kana kurira zvakanyanya ... iyi ndiyo nzira yavanoyera nayo kunaka kana kuipa kwechinhu, saka usatenga piritsi rinodhura, tenga iro rakakura uye une chokwadi chekuti wakarurama.
Ichokwadi zvakare kuti kana mwana ari mudiki, piritsi rakakura kwazvo rinogona kumupa matambudziko ekushandisa, saka ivo vanogona kupedzisira vagara pasi pane iyo inogona kudzoreka. Kunyanya nekuda kwechikonzero chekupedzisira ichi, mapiritsi evana anowanzo kuve nehukuru pakati pe7 ne8 inches.
Maitiro ekushandura piritsi rakajairwa kuita piritsi revana
CHIN FAI Nyaya Yevana...
Kana iwe wakasarudza kutenga yakajairika piritsi kuti uigadzirise sehwendefa yevana, saka iwe unofanirwa funga nezve akatevedzana mazano izvo zvichakuchengetera iwe yakawanda yemusoro, mari, uye zvakare zvinogumbura nekuda kwekushandisa zvisina kufanira. Semuyenzaniso:
Funga kutenga imwe kavha chaiyo yevana, sezvo kazhinji vane gobvu uye padding izvo zvinovadzivirira kubva kumapundu uye kudonha kunowanzoitika kazhinji pamazera aya panguva yemutambo.
Mudziviriri we girazi rakadzikama zvescreen zvaisazorwadza futi. Kwete chete kuchengetedza zvirinani chidzitiro kubva kumapundu, asiwo kuti chidzivirire kubva kumakwara kana iwe ukashandisa zvinopinza zvinhu pazviri.
Tora chinguva kugadzirisa password yekubhadhara system muGoogle Play uye kudzora kwevabereki, sezvandambotaura pamusoro. Izvi zvinomudzivirira kubva kune zvisina kufanira zvemukati uye zvakare zvichadzivirira account yako kubva kune zvingangotengwa zvisina hanya.
Isa software yekuwedzera kutonga kwevabereki, se Vana Nzvimbo, kuvharisa zviziviso zvisina kufanira zvemazera iwayo, mapurogiramu asina kufanira, kana kuwana kune zvevakuru.
Pamusoro pekuisa maapplication ekudzidzisa kana nezvakakodzera zvemukati: Youtube Vana, Disney +, nyaya dzevana, yekudhirowa, nezvimwe.
Nguva yekutenga tablet yemwana
Pakupedzisira, funga zera iyo yaunoda kutenga piritsi, uye izvo zvinodikanwa zvemudiki wako. Tichifunga izvozvo, uye kuti ivo vanofanirwa kuve nekutonga kwenguva yekushandiswa, kutarisisa nguva dzose, uye kutonga kwevabereki, piritsi rinogona kuve chishandiso chakanakisa chekudzidza, kuzorora, kudzidza uye kugadzirira nguva iyo matekinoroji matsva atove chikamu chezuva. zuva..
Aya marudzi ezvishandiso anozonyanya kunakidza kana vana tanga kutora mafoni, mahwendefa, kana maPC evakuru. Nenzira iyi vachave nemudziyo wakatsaurirwa kwavari, uye nezvose zvisingakwanisi kudzivirira kupinda kune zvinyorwa zvevanhu vakuru. Chishandiso chakagovaniswa pakati pevakuru nevadiki chinogona kukonzera matambudziko nekukonana kwemhuri pakugovera mashandisirwo.
Ndekupi kutenga tablet yevana yakachipa
ari mahwendefa evana anodhuraVese vana nevakuru vanogona kuwanikwa muzvitoro zvakawanda zvevana uye zvimwe zvitoro zvikuru. Mimwe mienzaniso ndeiyi:
Amazon: the American online sales giant ine nhamba huru yemhando, mhando uye zvinopihwa zvemapiritsi evana veese mazera. Naizvozvo, ndiyo imwe yeanofarira sarudzo uko kutenga zvigadzirwa izvi. Mukuwedzera, inopa zvose zvivimbiso uye kuchengeteka kwekutenga. Kana iwe uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge wanyoreswa
mhaswa: unogona kuenda kune chero chezvitoro zvakapararira munharaunda yenyika. Iyo Gala chain inopa sarudzo yakanaka yemapiritsi evana uye mamwe mahwendefa evakuru aunogona kuchinjisa vana. Vane mitengo yemakwikwi uye kumwe kukwidziridzwa. Uye zvakare, iwe zvakare une mukana wekuodha kubva kune yavo webhusaiti uye woita kuti itumirwe kumba kwako.
MediaMarkt: cheni yeGerman inopawo huviri uhwu, kukwanisa kutenga panyama muchitoro pachayo kana kubva pawebhusaiti yayo kuitira kuti itumirwe kumba kwako kana iwe usina nzvimbo yepedyo yekutengesa. Chero zvazvingava, vane mitengo yemakwikwi, kunyange zvazvo nhamba yemhando uye mienzaniso haisi iyo yakakura.
Dare reChirungu: yakafanana neyo yapfuura, yeSpanish inewo sarudzo ine mamwe emhando dzakakurumbira uye mienzaniso yemapiritsi evana. Iwe une sarudzo yekutenga muchitoro kana kukumbira kutumirwa kumba kubva kune yavo webhusaiti. Ehe, mitengo yavo haisi iyo yakachipa chaizvo, kunyangwe uine kumwe kukwidziridzwa uye flash inopa iwe unogona kuwana zvigadzirwa nemutengo wakanaka.
Mhedziso pamusoro petafura yevana
Kana iwe uri kufunga kutengera vana vako piritsi, tinokurudzira kuti uverenge nekungwarira rondedzero yatakakurudzira uye tsika. ndeipi yakanaka kwazvo sarudzo. Chero zvingave zvidikanwi zvemhuri yako kana chero bhajeti yako, zvirokwazvo rimwe remapiritsi masere evana atakakurudzira. yakakwana revana vako.
Unofanira chete funga nezvebhajeti yaunayo uye ndine chokwadi chekuti idzo dzatanyora dzinokwana zvaunoda.
Mahwendefa akadhura » Mahwendefa maererano nekushandiswa » The best tablet yevana
Tafura yekuona mafirimu